यूएईलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा • Pokhara News by Ganthan
यूएईलाई ६ विकेटले हराउँदै नेपाल फाइनलमा
प्रकाशित २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
२० चैत, काठमाडौं । नेपाल एसीसी ट्वान्टी-२० कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । झण्डै २० हजार दर्शकको उपस्थितिमा यूएईलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै नेपालले अफगानिस्तानसँगको उपाधी भिडन्त पक्का गरेको हो । फाइनल भिडन्त भोलि बुधबार हुनेछ ।
यूएईले जितका लागि प्रस्तुत गरेको १ सय ३४ रनको लक्ष्य नेपालले अन्तिम ५ बल बांकी छँदा ४ विकेटको क्षतिमा भेट्टाएको हो । अन्तिम २ ओभरमा १८ रन चाहिएको अवस्थामा विनोद भण्डारीको २ छक्काको मदतमा १९ औं ओभरमा १६ रन जोडेपछि नेपाल जित नजिक पुगेको हो । अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा कप्तान पारस खड्काले २ रन दिएपछि ५ बल अघि नै नेपाल विजयी भएको हो ।
नेपालका लागि प्रदीप ऐरीले सर्वाधिक ५८ रन जोडे भने सुवास खकुरेलले २२ रन जोडे । ओपनरद्धय प्रदीप र सुवासले ६१ रनको साझेदारी गरे । ज्ञानेन्द्र मल्लले २० रन जोड्दा विनोद भण्डारी १६ र कप्तान पारस खड्का १२ रनमा अविजित रहे । यसअघि त्रिबि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले व्याटिङ थालेको यूएईले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय ३३ रन बनाएको थियो । उसलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा पृथु बास्कोटाले २० रन दिएर ३ विकेट लिए भने शक्ति गौचन र बसन्त रेग्मीले समान २/२ तथा संजम रेग्मीले १ रन लिए ।
म्यान अफ दि म्याच प्रदीप ऐरी र पृथु बास्कोटालाई पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्रफी दिनु भएको थियो । यस्तै क्यानका अध्यक्ष टंक आङबुहाङले १५ हजार नगद प्रदान गर्नुभयो ।
यसअघि पहिलो सेमिफाइनलमा हङकङलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै अफगानिस्तान उपाधी नजिक पुगेको हो । पहिले व्याटिङ थालेको हङकङले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ९ रन बनाएको थियो । जवाफमा मैदान उत्रिएको अफगानिस्तानले १७ दशमलव १ ओभरमा मात्र ३ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टायो ।
खेलपछि नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्का र प्रशिक्षक पुबुद्धु दशानायकले भोलिको खेलमा पनि जित निकाल्ने बताउनु भयो । टस हार्नु नेपालको पक्षमा रहेको भन्दै पारसले आजको जित भोलि पनि दोहोर्‍याउने बताए । बलिङ सार्फ नभए व्याटिङ चलेको उनको भनाई छ । cp. onlinekhabar
एमाओवादीमा नेतृत्व चयनका लागि कार्यदल गठन
चुनाव घोषणा भए कांग्रेसको विवाद सकिन्छ : केसी
अमेरिकन आइडलको टप २०मा दिवेश पोखरेल २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
गण्डकी प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका ७ जना घर फर्किए, २४५ जना क्वारेन्टाइनमा २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
गण्डकी प्रदेशबाट कोरोना (कोभिड–१९) का ९३ परीक्षण, २ पोजेटिभ, ७३ नेगेटिभ २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
अमेरिकामा दुई नेपाली मृत फेला, कोरोनाको रिर्पोट आउन बाँकी २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
कोरोनाको बिरामी जाँच्ने तीन वटा बुथ निर्माण, पोखरामा गण्डकी अस्पतालमा राखीने २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
कोरोना संक्रमित बढे पछि लकडाउनमा कडाइ, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाइने २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि कर्मचारीलाई बिदा बस्न नपाइने (१२ बुदे निर्णय) २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
पोखरा महानगरपालिका वडा—४ मा विपन्न ५५ परिवारलाई राहत वितरण २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
पोखराको उत्तमचोकमा होटलका सेफ मृत फेला २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२
नेपालमा थप ३ जना कोरोना संक्रमित भेटिए २० चैत्र २०६९, मंगलवार १७:४२